Ireo sary ireo dia manolotra ny smartwatch Meizu | Androidsis
Ireto no sary voalohany amin'ny rindrambaiko Meizu voalohany; azo ambara amin'ny 10 aogositra
Manana isika maro karazana smartphone izay avy amin'ny tany sinoa izay mametraka antsika alohan'ny karazana famaritana, ny vidiny ary ny hatsaram-panahy isan-karazany izay afaka nanararaotra mpampiasa an-tapitrisany eran'izao tontolo izao. Tany amin'ny Tandrefana dia saika hiteny isika fa tena tia ny kalitaon'ireto mpanamboatra ireto izay avy any Shina. Ny iray amin'izy ireo dia Meizu, ary toy izany miandry an'i Xiaomi izahay indray andro dia manolotra ny smartwatch, efa teo alohany tamin'ny famantaranandrony manokana.
Ary manana ny tena sary voalohany an'ny Fandefasana rindrambaiko voalohany an'i Meizu. Sary sasantsasany izay mampiseho amintsika ny fahamarinan'ity rindrambaiko Meizu ity izay heverinay fa hanaraka ny lalàna napetrak'ity mpanamboatra ity sy ny maro hafa momba izay misy ifandraisany amin'ny sandan'ny vola be. Ny smartwatch dia boribory ary avy amin'izay hitantsika amin'ireto sary ireto dia toa tsara, satria miresaka ny lafiny mahazatra indrindra amin'ny famantaranandro mandritra ny androm-piainany izy io, zavatra manome hakantona lehibe araka ny hitanao amin'ny sary sisa.
Izahay koa dia manana ny sarin'ny fonosana smartwatch izay mitondra antsika mankany a boaty volafotsy miaraka amin'ny sary famantarana Meizu izay misongadina tsara. Raha ny momba ny smartwatch dia afaka mahita sary an-tsary na sary an-tsaina azo nohamboarina, fehin-kibo ary bokotra telo izay eo amin'ny sisiny ankavanan'ny vatan'ny famantaranandro isika.
Avy amin'ny famaritana, araka ny tsaho isan-karazany, ny akanjo azo anaovana dia ao anaty ny vavony ny Rockchip RK6321 puce izay omena cores Cortex A5 roa, izay midika fa miatrika SoC isika izay tsy kendrena any amin'ny avo indrindra. Mitarika antsika amin'ny làlana hafa ihany koa izany, ary izany dia ny smartwatch Meizu tsy mampiasa Android Wear, satria io sehatra io dia mifandraika amin'ny fampiasana chips Qualcomm.
Ny daty mety hanambarana anao dia August 10.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ireto no sary voalohany amin'ny rindrambaiko Meizu voalohany; azo ambara amin'ny 10 aogositra
Azo zahana amin'ny Twitter ao amin'ny Twitter daholo izao ny stickers toa Snapchat